Nolosha Finland > Qoyska > Guurka > Go’aanka magaca qoyska
Haddii Finland ay tahay meesha aad deggan tahay magaca qoyskaada waxaa go’aaminaya sharciga Finland. Sidan ayaa la sameynayaa haddii aadan xittaa aheyn muwaadin Finnish ah.
Marka aad guursaneysaan waa in aad go’aan ka gaartaan magaca qoyskiina.
qaadan kartaa magac qoys oo wadajir ah ama
waxaad heysan kartaan magaciina qoyska ama
waxaad magaciina qoyska ka sameysan kartaan magac qoys oo isku xiran.
Labadiina magac qoys waxey ka muuqanayaan isku xirka magaca qoyska, tusaale ahaan Virtanen-Smith. Magacyada xittaa waxaa la kala qori karaa iyadoo aysan la socon xariiqinta dhexe.
Magac gebi ahaanba cusub ayaad u dooran kartaa magaca qoyska ee idinka dhexeeya. Codsiga beddelista magaca ka codsada xafiiska diiwaangelinta dadka magaca qoyska ee cusub.
Magac qoys looma dooran magac ay lammaanahaada ku heshay guurkeedi jore.
Doorta magaciina qoyska marka aad codsaneysaan baaritaanka xannibka guurka. Ku wargeliya arrinta xafiiska diiwaangelinta dadka. Foomka waxaa laga helaa xafiiska diiwaangelinta dadka ama bogagga shabakadda ee xafiiska diiwaangelinta dadka.
Magaca qoyska ee lamaanaha ito magaaca qoyska ee caruurta- buug yareFinnish | Iswidish | Ingiriis
Beddelista magaca qoyska inta lagu jiro muddada guurka
Haddii aad leedahay magac qoys oo isku xiran, tusaale ahaan Virtanen-Smith waxaad inta lagu jiro wakhtiga guurka ka noqon kartaa labada magac midkood. Waxaad sidoo kale qaadan kartaa magaca qoyska ee isku xiran inta lagu jiro wakhtiga guurka. Codsi qoraal ah oo arrintan ku saabsan u dir xafiiska diiwaangelinta dadka.
Macluumaadka loo gudbinayo hay’adaha dowladdaada (muwaadin ajnabi ah)
Haddii uu magaca qoyskaadu isbeddelo waa in aad wakiilka dalkaada ogeysiisaa, si aad magacaada cusub ugu qaado baasaboor hay’adaha dowladduna ay u heystaan macluumaad isku mid ah. Weydii macluumaad dheeraad ah wakiilka dalkaada. Macluumaadyada xiriirka ee safaaradaha waxaa laga helaa bogagga shabakadda ee Wasaaradda Arrimaha Dibedda.
Warar dheeraad ah oo ku saabsan magaca qoyska ee cunugga, ka eeg bogga Finland markii uu ilmuhu dhaso.
Warar dheeraad ah oo ku saabsan magaca qoyska marka xaalad furiin lagu jiro, ka eeg bogga Furiinka.